Isleegyada Maxwell: taariikh nololeedkiisa iyo muhiimadiisa | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 23/02/2021 10:05 | La cusbooneysiiyay 23/02/2021 10:39 | Kala bixid
Taariikhda oo dhan waxaa jiray saynisyahano badan oo wax weyn ku soo kordhiyay cilmiga taas oo sababtay horumar aad u weyn. Tani waa kiiska dhaqtarka reer Scotland ee James Clerk Maxwell. Fiisigisyahankan wuxuu dejiyay aragtida caadiga ah ee elektromagnetism-ka isagoo yareynaya xaqiiqda ah in nalka uu ka sameysan yahay aagag koronto iyo birlab oo si isdaba joog ah ugu faafinaya hawada sare. Dhamaan kajaritaanadan waxaa lagu soo bandhigay Isleegyada Maxwell si aad u muujiso una muujiso aragtidaada. Aragtidaani waxay horseeday saadaasha jiritaanka mowjadaha raadiyaha iyo hirarka raadiyaha.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan taariikh-nololeedka, ifafaaleyaasha taariikhiga ah ee ku saabsan isleegyada Maxwell.
1 Taariikh nololeedka Maxwell
2 Isleegyada Maxwell
3 Muhiimadda isleegyada Maxwell
Taariikh nololeedka Maxwell
Maskaxda ku hay in saynisyahannada oo dhami ay ka bilaabaan shaqo ay qabteen saynisyahanno kale oo hore. Hadalkan waxaa ku muujiyey Newton weedha ah "Dhammaan saynisyahannadu waxay ku shaqeeyaan garbaha garbaha". Taas macnaheedu waxa weeye in fekerka badankood lagu qabtay mahaddii shaqadii ay horey u qabatay saynisyahano kale. Xaqiiqadani waxay si gaar ah run ugu tahay kiiska Maxwell maaddaama uu awood u lahaa inuu isku daro dhammaan aqoontii horey u jirtay 150 sano ee ku saabsan mowduuca shaqadiisa. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad ku muujiso mabaadi'da korantada, magnetism, optics iyo isdhexgalka jidheed.
James Clerk Maxwell wuxuu ku dhashay Edinburgh 1831. Qoyskiisu waxay ahaayeen dabaqadda dhexe. Ninkani wuxuu markasta muujiyey xiisaha gaarka ah ee laga soo bilaabo yaraannimadiisii. Aniga oo 14 jir ah ayaan hore u qoray warqad. Warqaddan waxaan ku sharaxay hababka farsamo ee ugu horreeya ee lagu daaweyn karo qallooca. Wuxuu wax ku bartay jaamacadaha Edinburgh iyo Cambridge halkaas oo uu ka yaabiyay ardayda iyo macallimiinta oo la siiyay awooddiisa xallinta dhibaatooyinka tirada. Dhibaatooyinka oo dhami waxay ka muuqdeen maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska oo ku adkaa ardayda inteeda kale.
Isaga oo 23 jir ah ayuu xisaabta ka qalin jabiyay kuliyadda Trinity College iyo laba sano ka dib wuxuu awooday inuu helo jagada Professor-ka Falsafadda ee Marischal College, Aberdeen. Wuxuu ku sugnaa degelkan 4 sano wuxuuna been abuurayay aqoon badan. Qaabkaas oo ah in 1860 uu awooday inuu helo jago la mid ah laakiin kulliyadda caanka ah ee King's College, London. Waa wakhtigaas wakhtiga ugu miraha badan ee xirfaddiisa oo dhan bilaabmay. Meeshan waxaa ka jiray dhaqaale aad uga wanaagsan oo u oggolaaday inuu sameeyo tijaabooyin iyo tijaabiyo aragtidiisa.
Isleegyada Maxwell ayaa laga yaabaa inay yihiin dhaxalka ugu wanaagsan ee saynisyahankan ka tagay. Tan iyo markii heerkiisa iyo tabarucaadkiisa sayniska ay sii kordhayeen, Wuxuu awooday inuu ku biiro Royal Society sanadkii 1861. Tani waxay ahayd meeshii dadweynaha ama aragtida elektromagnetic-ka ee iftiinka uu kula soo noqday qoyskiisa guriga waalidkiis ee Scotland. Waxaa loo magacaabay agaasimaha sheybaarka Cavendish ee Cambridge sanadkii 1871. Ugu dambeyntiina wuxuu u dhintay kansarka ku dhaca caloosha isagoo jira 48 sano 1879.
Waa daabacaadda maqaalka cinwaankiisu yahay "Aragtida firfircoon ee aagga elektromagnetic" halkaasoo isla'egyada Maxwell ay ka muuqdeen markii ugu horreysay. Isleegyadaani waa kuwa u adeega in lagu muujiyo qaab cad oo kooban dhammaan sharciyada dabiiciga ah ee ku saabsan korantada iyo birlabta. Waa in maanka lagu hayaa in la sameeyay ilaa qarnigii XNUMXaad iyo ku tiirsanaa sharciyada Ampere, Faraday iyo Lenz. Waqtigan xaadirka ah, sharaxaadda dulinka ee la isticmaalay waxaa soo saaray sanado ka dib Heaviside iyo Gibbs.
Muhiimadda isleegyada Maxwell
Qiimaha isle'egyadan oo aan kaliya ku noolayn isku-dhafka dhammaan fikradaha dhammaan saynisyahannadii bixinayay macluumaadka korantada iyo birlabta. Waana taas Isleegyada Maxwell ayaa shaaca ka qaaday isdhexgalka dhow ee korantada iyo birlabta. Isleegyo kale ayaa laga soo saari karaa isla'egyadeeda, sida isle'egta hirka ee u adeegtay saadaalinta jiritaanka hirarka elektromagnetic ee awooda inay ku faafiyaan xawaaraha iftiinka.
Tan waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in iftiinka iyo birlabku ay yihiin dhinacyo isla walaxdaas ah isla markaana iftiinka uu yahay khalkhalka elektromagnetic. Tan awgeed, shaqada Maxwell waxay u adeegtay isku-dubaridka iyo mideynta optics-ka elektromagnetism-ka waxayna muujisay nuxurka elektromagnetic ee iftiinka uu leeyahay. Nuxurka elektromagnetic-ka iftiinka waxaa u sabab ahaa tijaabinta shaybaarka waxaana fuliyay dhakhtarkii fiisikiska ahaa ee reer Jarmal Heinrich Hertz sanadkii 1887, sannado ka dib dhimashadii Maxwell.
Tan waxaa lagu samayn karaa iyada oo la dhiso oscillator u adeegay sidii emitter iyo resonator u shaqeeyay sidii soo-qaate. Mahadsanid aaladahaan waxaa suurto gashay in la abuuro mowjado oo lagu soo dhoweeyo meel fog taasna waxay sababtay injineer Talyaani ah oo la magacaabay Guillermo Marconi wuu kaamil noqon karaa farsamada si loo abuuro kacaan farsamo. Kacaankan tikniyoolajiyadeed waa isgaarsiinta raadiyaha. Qaar ka mid ah walxaha maalinlaha ah ee aan maanta haysanno, sida taleefannada gacanta, waxay ku saleysan yihiin tikniyoolajiyaddan uu helay Guillermo Marconi.
Dhammaan sababahan ayaa ku filan in la rumaysto in isla'egyada Maxwell, oo marka hore u muuqan kara xoogaa aragti ahaan ka hooseeya sayniska aasaasiga ah, ay ku dhammaadeen inay leeyihiin codsiyo waaweyn oo tiknoolajiyadda maanta ah. Adeegsiga isleegyada Maxwell wuxuu u yimid inuu adduunka u beddelo sidan oo kale waxaan kala xiriiri karnaa iyadoo la adeegsanayo isgaarsiinta.
Dhammaan tabarucaadyadan kuma eka kaliya aragtida elektromagnetismka iyo iftiinka. Maskaxda ku hay in Maxwell uu ahaa nin cilmiga fiisigiska xiise u leh oo isaguna naftiisa u huray barashada cilmiga gaaska iyo heer-kulka thermodynamics. Dhinacyadan waxaa lagu dabaqay habab kala duwan oo falanqeyn tirakoob ah si loo go'aamiyo suurtagalnimada in qayb ka mid ah gaaska khafiifka ahi leeyahay xawaare la siiyay. Daahfurkaani wuxuu ahaa Maanta wuxuu ugu yeeray qaybinta Maxwell-Boltzmann.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto isla'egyada Maxwell iyo muhiimadooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Isleegyada Maxwell